နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းများ | FLEGT
နှစ်ဖက်သဘောတူ VPA ဆွေးနွေးခြင်းများ
EU နှင့် သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံအကြား နှစ်ဖက်သဘောတူ ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက်(VPA) ဆွေးနွေးခြင်းများသည် ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည့်ဆွေးနွေးခြင်းများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် တရားဝင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရခြင်းစာချုပ်ဖြစ်သည်။
နှစ်ဖက်သဘောတူ ဆွေးနွေးခြင်းများသည် VPA လုပ်ငန်းစဉ် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအဆင့်ဖြစ်သည့် အမျိုးသားအဆင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ဆွေးနွေးပွဲများမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် ခံယူချက်များအပေါ်တွင် ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အများစုနှင့်မတူသည့်အချက်မှာ EU နှင့် သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံသည် VPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရာတွင် ပြိုင်ဖက်များမဟုတ်ကြပါ။ အတိအကျဆိုရလျှင် နှစ်ဖက်အဖွဲ့တို့သည် တရားမဝင် သစ်ခုတ်ခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပြဿနာများအတွက် မျှဝေနိုင်သည့် အဖြေကိုအတူတကွ ရှာဖွေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် လိုက်နာရမည့်အသေးစိတ် အစီအစဉ်များမရှိပါ။ VPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည် တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံကွဲပြားခြားနားပြီး VPA တွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများကို အမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်များမှ အဆုံးအဖြတ်ပေးပါသည်။
EU သစ်တောဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် ကုန်သွယ်ရေး (FLEGT) လုပ်ငန်းစီမံချက်သည် EU ၏ မျှော်မှန်းချက်များကိုဘောင်ခတ်ထားပါသည်။ EU သည် သစ်တင်ပို့ သည့်နိုင်ငံများ၌ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်များ အားကောင်းလာစေရန်၊ သစ်တောကဏ္ဍ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တိုး တက်လာစေရန်နှင့် EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ခိုင်မာသော ကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေး များကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများကိုအကူအညီပေးခြင်းဖြင့် EU စျေးကွက်အတွင်းသို့ တရားမ ဝင်သစ်များ ဝင်ရောက်လာခြင်းအား ကာကွယ်ရန်ကြိုးပမ်းပါသည်။
EU သည် ကုန်သွယ်ရေးအသာစီးရရန်မကြိုးပမ်းပါ။ EU ၏ အဓိကစိုးရိမ်မှုမှာ အများယုံကြည် လက်ခံ နိုင်မှုရှိရန် VPA တွင် အကြမ်းဖျင်း ဖော်ပြထားသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏နောက်ကွယ်ရှိ အများဆန္ဒ နှင့် ယုံကြည်မှုရှိလာသဖြင့်ရလာသော အမျိုးသားအဆင့်အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ထောက်ခံမှုဖြစ်သည်။ VPA တွင် ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာမှုရှိရေး သေချာစေသည့် ခိုင်မာသော စနစ်တစ်ခုပါရှိရမည်။ FLEGT လုပ်ငန်းစီမံချက်တွင် "စိန်ခေါ်မှုဆိုသည်မှာတရားမဝင်သော သစ်ခုတ်ခြင်း ကို ဖြေရှင်းရေးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ၊ အထူးသဖြင့်မြှင့်တင်ထားသည့် ဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ အားကောင်း သည့်သူများကို မထိခိုက်စေသလို ကျေးလက်ဒေသရှိ ဆင်းရဲသူများကဲ့သို့ အားနည်းသည့် အဖွဲ့များ ကိုလည်း ပစ်မှတ်မထားရန် ဖြစ်ပါသည်။" ဟုဖော်ပြထားသည်။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါဝင်သောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများတွင် ဥရောပကော်မရှင်သည် ဥရောပသမဂ္ဂကောင်စီ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါသည်။ ဥရောပကော်မရှင်၏စေ့စပ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသူများသည် VPA ၏ အဓိကစာသားများကို ရိုးရှင်းစေရန် နှင့် VPAs များအကြား တူညီသောပုံစံရှိနေစေရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ကြပြီး နိုင်ငံအလိုက် သဘောတူညီချက်တစ်ခုစီ၏အသေးစိတ်အချက်များအတွက် နောက်ဆက် တွဲများကို အသုံးပြုကြသည်။
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့များ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေမှုကြောင့် သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံများ၏ မျှော်မှန်း ချက်များမှာလည်းကွဲပြားပါသည်။ အချို့အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် VPA မှ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။ အချို့သည် VPA မှ သစ်တောများကို ကာကွယ်ပြီး ဒေသခံများ၏ဘဝနေထိုင်မှု ကိုပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေလိမ့် မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။ ဦးစားပေးမှုအမျိုးမျိုးသည် စိန်ခေါ်မှုများကိုဖန်တီးပြီး အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် ကိစ္စရပ်များ ကိုနားလည်ရန်၊ ထင်မြင်ချက်များကို ပုံဖော်ရန် နှင့် ၎င်းတို့၏အမြင်များကိုဖော်ပြရန် အချိန်နှင့်အခွင့် အရေးလိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုပါသည်။
နှစ်ဖွဲ့အကြားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများ မတူညီသလို သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံများ အကြားတွင် လည်းကွဲပြားသည်။ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် တစ်နိုင်ငံထက်ပို၍ ထောက်ခံထား သည့် ဥရောပကော်မရှင် မှ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က EU ကိုယ်စားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပါသည်။
သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံအစိုးရမှ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ၎င်းကို မည်သူကကိုယ်စားပြုသည်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ယနေ့အထိ လက်မှတ်ထိုးပြီးသော VPAs ခြောက်ခုတွင် မိတ်ဖက်နိုင်ငံများသည် ပုဂ္ဂလိကနှင့် အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသည့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ခေါင်းဆောင် စေ့စပ်ဆွေးနွေးသူကို ရွေးချယ်ခြင်းမှာ အလွန်အရေး ကြီးပြီး ၎င်းသည် နိုင်ငံအတွင်း ရပ်တည်ချက် များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းကဲ့သို့သောကျွမ်းကျင်မှု နှင့် အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ အချို့နိုင်ငံများသည် စွမ်းရည်ပြည့်ဝပြီး တက်ကြွသည့်ခေါင်းဆောင် ဆွေးနွေး သူကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများကိုနှောင့်နှေး ကြန့်ကြာစေပါသည်။
အသေးစိတ်နှင့် ဥပမာများကို VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများ၏ အမျိုးသားအဆင့် VPA ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခြင်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများ ကဏ္ဍတွင် ပိုမိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါဝင်သော ဆွေးနွေးပွဲများကို EU နှင့် သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံတို့၌ မျက်နှာခြင်းဆိုင် တွေ့ဆုံမှုများနှင့် ဗွီဒီယို ကွန်ဖရင့်များဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံရေးအဆင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ပွဲများကြောင့် VPA ၏အချို့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် နည်းပညာဖလှယ်မှုများပါဝင်လာပါသည်။ EU နှင့်၊ သို့မဟုတ် EU ၏ FLEGT Facility ဝန်ထမ်းများနှင့် အမျိုးသားအဆင့် ကိုယ်စားလှယ်များသည် တရားဝင်ဖြစ်မှုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် သို့မဟုတ် သစ်ခြေရာခံစနစ်များကဲ့သို့ VPA ၏ သီးခြားကဏ္ဍအချို့ကို ပူးတွဲပညာရှင်အဆင့်ဆွေးနွေးပွဲများတွင်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြသည်။
VPA လုပ်ငန်းစဉ်အများစုတွင် ကြားနေသောဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူနှင့်ရည်မှန်းထားသည့်နည်းပညာ အထောက်အပံ့ ပေးရေးအစီအစဉ်များရှိပါသည်။ ကြားနေ၍ အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် ဆောင်ရွက်ပေး သူများအကြောင်း၊ အလုပ် လုပ်ပုံနှင့် သူတို့ကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားပုံတို့ကို VPA ဆိုင်ရာကိုးကား စရာများ ၏VPA နှင့် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများအားထောက်ပံ့ခြင်း နှင့်ပတ်သက်သည့်အခန်းတွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
ပထမဆုံးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါဝင်သော ဆွေးနွေးပွဲသည် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲအဖြစ် တရားဝင်စေပြီး နောက်ပိုင်း ပြောဆိုမှုများအတွက် ရည်မှန်းချက်များနှင့်နယ်ပယ်ကို ချမှတ်ပေးသည်။ အစပိုင်းဆွေးနွေးပွဲ များသည် အဖွဲ့ဝင်တိုင်းအား အခြားအဖွဲ့များ၏မျှော်မှန်းချက်များနှင့် VPA မှ ဖြေရှင်းပေးသင့်သည်ဟု အကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများမှ ညွှန်ပြသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို နားလည်သဘောပေါက်စေသည်။ ပထမဦးဆုံးသော ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသူများသည် အခန်းကဏ္ဍများ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ နှင့်လိုက်နာရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသတ်မှတ်ကြသည်။ စေ့စပ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသူများသည် နောက်ထပ် အစည်းအဝေးပွဲများအတွက် လမ်းပြမြေပုံ သို့မဟုတ် အချိန်ဇယားဆွဲနိုင်သည်။ ထို့နောက် အဖွဲ့ဝင်များသည် VPA သဘောတူညီရန် ၎င်းတို့ပါဝင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းကိုထပ်လောင်း အတည်ပြုသည့် အများပြည်သူသို့ကြေညာချက်တစ်ရပ်ကိုထုတ်ပြန် ပါသည်။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါဝင်သော ဆွေးနွေးပွဲများသည် VPA စာသားနှင့် ၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာရေးကို အာရုံစိုက်သည်။ တရားဝင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအပြင် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် တရားဝင်ဖြစ်မှု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်၊ သို့မဟုတ် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ် ၏ အစိတ်အပိုင်းများ ကဲ့သို့သော သဘောတူညီချက်ပါ အချက်များကိုစမ်းသပ်သည့် ကွင်းဆင်းလုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်နည်းပညာ အစည်းအဝေးများလည်းပါဝင်သည်။ စမ်းသပ်မှုများသည် ကုမ္ပဏီများဖက်မှ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် အစိုးရ၏ ဥပဒေနှင့် အမိန့်အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိရေးများ အကြားကွာဟချက် ကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
VPA ၏ စာသားများနှင့် နောက်ဆက်တွဲများကို အဖွဲ့ဝင်များသဘောတူသည်နှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါဝင်သော ဆွေးနွေးပွဲများ ပြီးဆုံးပါသည်။ VPA သည် လုံးဝပြည့်စုံနေရန်မလိုအပ်သော်လည်း ယုံကြည်ရမှု၊ အတည်ပြုနိုင်မှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုရှိရပါမည်။ သဘောတူညီချက်သည် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံရှိ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများအကြား အမျိုးသားအဆင့်အများဆန္ဒကို ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်ရမည်ဖြစ်ပြီး EU အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သည့် သူများ၏ထောက်ခံမှုရရှိရမည်။ နောက်ဆုံးအဆင့် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းသည့်အခန်းတွင် အဖွဲ့ဝင်များသည် VPA အတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းအတွက် အချိန်ဇယားကို ဆွေးနွေးကြရသည်။ VPA အား လက်မှတ်တိုရေးထိုးခြင်းဖြင့် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခြင်းများပြီးဆုံးပြီးအတည်ပြုခြင်းကိုစတင်ကြောင်းအဖွဲ့ဝင်များကအချက်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းလမ်းပြမြေပုံအတွက် သတ်မှတ်ချိန်သည်လမ်းညွှန်မှုသက်သက်သာဖြစ်သည် VPA ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုသည်နှစ်ကာလကြာရှည်နိုင်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံပါဝင်သည့်အဖွဲ့များက ကနဦးယူဆထား သည် ထက် ပိုမိုကြာမြင့် တတ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်နိုင်ရန် နှင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောစိန်ခေါ်မှုများကို အဖြေရှာရန် လုံလောက်သော အချိန် လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ အစိုးရများနှင့် အခြားအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားသည် အခြားသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် အခြား လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ပြောင်းလဲသွားလျှင် သို့မဟုတ် အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးထားမှုများနှင့် နှစ်ဖက်သဘောတူဆွေးနွေးမှုများ မကိုက်ညီလျှင်လည်း ကြန့်ကြာမှုများဖြစ်နိုင်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အရည်အသွေးသည် လျင်မြန်မှုထက်ပိုမိုအရေးကြီးပြီး နှေးကွေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းလည်း အရည်အသွေးရှိသည်ဟုပြော၍မရပါ။ တိုးတက်မှုကို ထိခိုက်စေ သည့် အကြောင်းရင်းများတွင် နိုင်ငံအဆင့်ရွေးကောက်ပွဲများ သို့မဟုတ် သစ်ထုတ်ခြင်း နှင့်ကုန်သွယ်မှုကို ထိခိုက်စေသော နိုင်ငံအဆင့်၊ ဒေသအဆင့် သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့အဆင့် စီးပွားရေး အနိမ့်အမြင့်များ ပါဝင်ပါ သည်။
VPA လုပ်ငန်းစဉ် ၏ကြိုတင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအဆင့်
Othman, M. et al. 2012. FLEGT Voluntary Partnership Agreements. ETFRN News 53: 109-116. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]